VaTsvangirai Vokurudzira Vanhu Kuti Vanovhota Vakawanda
Kurume 28, 2008
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vakurudzira vanhu kuti vaende kunovhota vakawanda neMugovera, kuitira kuti VaMugabe vasawane mukana wekubira sarudzo. VaTsvangirai vanotiwo vari kutaurirana nevamwe vari kukwikidza, VaSimba Makoni, kuti vaone kuti hapana kubiridzirwa kuchaitwa sarudzo idzi. VaTsvangirai vati vane humbowo hwekuti kuMashonaland Central kwange kuchida kuiswa mapolling stations makumi matatu nemashanu asingaziviukanwe, asi vazvidzivisa.
Ukuwo vakuru vemauto pamwe nemapurisa vaudza vatori venhau muHarare kuti vakagadzirira kunyaradza vose vachada kuita zvemhirizhonga munguva yesarudzo. Vakuru ava vakurudzira vanhu kuti vaende kudzimba dzavo kana vangopedza kuvhota, vachiti vanhu vateerere zvichabuda musarudzo vari mudzimba dzavo. Izvi zvinenge zvanangana nekurudziro yebato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, yekuti vanhu varambe vari panzvimbo dzekuvhotera kana vavhota
Blessing Zulu weStudio 7 abata VaTsvangirai akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemashoko emapurisa nemauto ekuti vanhu vanzwe zvabuda musarudzo vari mudzimba dzavo.
Munyori wezvekuchengetedzwa kwenyika muMDC yaVaTsvangirai, VaGiles Mutsekwa, vaudzawo Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti vakuru vemauto nemapurisa ava vava kushanda sevanoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muZanu PF.
Jonga Kandemiiri weStudio 7 abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, avo vati vanhu vane kodzero yekuramba vari panzvimbo dzavanenge vavhotera, sezvo pasina mutemo unovarambidza kuita izvi.